November 27, 2020 RESTBET 497 RESTBET497 8
EkoTürk TV မှ Serhat Ulueren က “Sergen Yalçın၏ coronavirus စမ်းသပ်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးသည်နှင့်Beşiktaşကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုမှုရခဲ့သလား” ဟုပြောသည်။ Nihat Özdemirက“ Beşiktaşကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့တောင်းဆိုမှုမရှိဘူး။ သူတို့က ‘Sergen အိမ်မှာရှိနေပြီ၊ ငါတို့ဆရာ Murat နဲ့လည်းဆက်လုပ်မယ်’ လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။
နီဟတ်Özdemirက “Sergen Yalçınကိုကျော်သွားပါ။ ငါBeşiktaşဥက္ကMr.္ဌ Mr. fromebi ထံမှသင်ယူသည်။ သူမှာရောဂါလက္ခဏာတွေမရှိဘူး။ သူ့မှာ ၁၅ ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ကာလရှိတယ်။ နောက်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကို ဦး ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်” ရှင်းပြချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
“သင်ဘောလုံးကစားသမား ၁၄ ဦး ယူဆောင်လာမည်”
RESTBET497 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI SUPERTOTOBET0120 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI BETBABA138 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI SULTANBET561 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI BETBABA100 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI RESTBET497 SERGEN YALÇIN NİKOLA KALİNİC’İ BEKLİYOR SUPERTOTOBET0121 FALCAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR? SUPERBAHİS630 FALCAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR? BETPAS423 FALCAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNÜYOR? RESTBET497 SERGEN YALÇIN NİKOLA KALİNİC’İ BEKLİYOR
8 Comments on RESTBET497 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI
HİKMET November 29, 2020 at 9:40 am
MEHTAP November 29, 2020 at 12:00 pm
SEYFİ CEM December 2, 2020 at 5:30 am
TUBA December 3, 2020 at 12:50 pm
MEHMET December 6, 2020 at 5:00 am
DİNÇ December 6, 2020 at 8:20 pm
restbet yeni adresi yatırımlarımı artırdığım tek site betist
ERK December 6, 2020 at 11:00 pm
SEDA December 11, 2020 at 6:00 am